Awoodda Anaerobic: waa maxay iyo sida aad u tababaran karto | Ragga Stylish
Markaan sameyno isboorti iska caabin ilaa dalbashada waxqabad sare waa inaan tixgelin siino in laba nooc oo iska caabin ah ay ku dhaqmaan jirkeena. Dhinaca kale waxaan leenahay adkeysiga aerobikada iyo, dhanka kale, adkeysiga aerobic. Markii aan bilawno isboorti yar yar, badanaa waxay ku bilaabataa fadhiyo gaagaaban, socod lug ah si aan hawada u qabsano ama wax un unandanding. Si kastaba ha noqotee, markaan bilowno inaan u dhadhamino, waxaan ku dhammeyneynaa ku ciyaar jimicsi heer sare ah. Si aan u ogaanno sida ugu wanaagsan ee wax loo qabto waa inaan ogaanno waxayaga awoodda anaerobic.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa waxa ay tahay awooda aerobic iyo nooca ay u adeegto si loo kordhiyo waxqabadka jimicsiga.
1 Farqiga u dhexeeya adkeysiga aerobic iyo anaerobic
2 Awoodda Anaerobic iyo khadka wax lagu qaybiyo
3 Sida loo tababaro awoodda anaerobic
Farqiga u dhexeeya adkeysiga aerobic iyo anaerobic
Si loo ogaado awoodda anaerobic ee qofka, waa inaan marka hore ogaanno waxa ugu weyn ee u dhexeeya caabbinta hawada y iska caabinta jirka. Labada xaaladoodba waxaan ula jeednaa waxa jidhku sameeyo si uu tamar u helo. Jidhkeenu wuxuu ubaahan yahay iska caabin aerobic ah marka aan sameyno jimicsi xoog dhexdhexaad ah ama hooseeya, laakiin taasi waa lagu dheereeyaa waqtiga. Tusaale ahaan, haddii aan u baxnay inaan ku soo baxno xawaare jilicsan muddo saacad ah, jidhkeennu wuxuu adeegsan jiray caabbinta aerobic si uu u sii socdo muddadaas dheer.
Xaaladdan oo kale, ilaha ugu muhiimsan ee nafaqooyinka jirku ubaahanyahay waa karbohaydraytyada iyo dufanka. Labada nafaqeeye ayaa loo gubay tamar ahaan iyo inay awoodaan inay u guuraan oksijiinka jirkeena. Si loo gubo tamartaan waxaad u baahan tahay oksijiin sidaa darteed waxaan fahmi doonnaa inaan si xoog leh u neefsanno.
Dhinaca kale, waxaan leenahay adkeysi anaerobic ah. Caabbintaan waxaa tijaabada la saarayaa marka aan sameyno jimicsiyo soconaya muddo gaaban laakiin leh xoog sare. Awooddaani waxay ka muuqataa wadnaha wadnaheenna. Jimicsi xoog leh oo nagu filan oo ah inaan u adeegsanno iska caabinta anaerobic waxay noqon kartaa mid dhammaystiran inta udhaxeysa 170 iyo 220 garaac daqiiqadii. Jimicsiga noocan ah, tamarta jirku u baahan yahay inuu si sax ah u fuliyo wuxuu u baahan yahay inuu ahaado mid degdeg ah. Daaweynta tamarta ugu weyn ee kiiskan waa gulukoos iyo fosfoorasayn.
Ereyga anaerobic macnihiisu waa oksijiin la'aan. Awoodda uu jirku leeyahay waxay noqon kartaa lactic iyo alactic labadaba. Tan macnaheedu waxa weeye in lactic acid la soo saari karo oo muruqyadu seexdaan waana waxa soo saara daal iyo murqo xanuun, oo hadhow isu rogo xanuun.
Awoodda Anaerobic iyo khadka wax lagu qaybiyo
In kasta oo iskudayo isdaba-joog ah oo lagu kala saarayo adkaysiga anaerobic iyo adkaysiga aerobicka, haddana ma jiro xariijin kala qaybsan oo gebi ahaanba ah Jidhku sida caadiga ah wuxuu isticmaalaa labadan diidmo, markaa jimicsiga waxaa la odhan karaa wuxuu u badan yahay aerobic ama anaerobic. Marnaba ma dhihi karno jimicsi gabi ahaanba waa mid ama mid kale.
Halkani waa meesha aan u nimid inaan qeexno waxa ay tahay awoodda anaerobic. Awoodda anaerobic waa sida u gudubka u dhexeeya adkeysiga aerobic iyo adkeysiga anaerobic. Waxaa jira waqti ku-meel-gaadh ah oo aan la kulanno xadka aerobic. Halkaas ayey jirkeedu ka soo saari doonaa aashitada lactic acid oo uu bilaabi doonaa inuu kordho ilaa aan ka gaarno meeshii ugu sarreysay ee halkaasoo uruurinta dhiigga ee acid lactic-ka uu cirka isku shareerayo. Tani waa halka aan ku yeelan doonno mid kasta marinka anaerobic
Awoodda aan u leenahay inaan ku sii dheereyno dariiqaas anaerobicka ah, ayaa awoodda aerobic ee badan aan yeelan doonnaa. Taasi waa, waxaan sameyn karnaa jimicsi xoog leh oo xoogaa yar. Waqtigaasi waligiis kuma filnaan doono waxyaabaha ugu muhiimsan ee tamarta u adkaysta adkaysiga aaladda sida karbohaydraytyada iyo dufanka in la isticmaalo. In kasta oo aan haysanno xaddiga weyn ee anaerobic, tamarta tamarta la isticmaalo waxay sii ahaan doontaa gulukoos iyo fosfoosis.
Halkan waxaan ku soo qaadaneynaa tusaale aan si fiican ugu fahmayno waxa ay tahay awoodda anaerobic. Waxaa jira maaddooyin kala duwan oo caan ah, sida orodka, socodka, baaskiil wadista ama dabaasha. Jimicsiyadan ayaa u badan kuwa jimicsi sameeya. Si kastaba ha noqotee, marka aan jimicsi ku sameyno qolka jimicsiga sida qaadista culeyska, waxaan sameyneynaa layliyo awood anaerobic ah. Marka aan ku tababbarayno culeys nagu filan si xoojinta sare waxay u horseedaa waxa loo yaqaan muruq jabka. Waqtigaan ayaa ah markii muruqeena uusan ka adkaan karin iska caabinta aan bixinayno. Awoodda iyo awoodda anaerobic ee badan ee aan leenahay, ayaa ku celcelin badan oo aan ku sameyn karno culeys sarreeya annaga oo aan gaarin muruqyada.
Sida loo tababaro awoodda anaerobic
Markii aan isku dayeyno inaan kor u qaadno awoodeena jimicsiga oo aan bilow nahay, waxaa ugu wanaagsan inaan ku bilowno laylisyada jimicsiga. Sidan oo kale, waxaan ku helaynaa wax badan oo iska caabin ah bilowga. In kasta oo xiriirka ka dhexeeya awoodda aerobic iyo awoodda anaerobic si buuxda uguma xirnaMarka laga eego dhinaca dheef-shiid kiimikaadka ee adag, waxaa iska cad in haddii aan awood u leenahay jir-dhiska aerobic, aan heli doonno nafaqooyin badan oo keyd ah.
Tani waa sida aan u helno kal-fadhiga socodka fudud ee naga caawinaya inaan kor u qaadno iska caabinta anaerobic si toos ah bilowga. Waxaan ku bilaabi karnaa kuleylinta ilaa 10 daqiiqo dhaqdhaqaaq wada jir ah iyo taxane ah 150 mitir xawaaraha ugu badan. Waxaan u oggolaaneynaa illaa 7 daqiiqo inay dhaafto si aan u qaban karno taxane labaad oo kale oo ah 150 mitir isla xooga kii hore. Inta lagu jiro 7daas daqiiqo ee nasashada ah, waxaan tagi karnaa orodka ama inta aan ku guda jirno.
Ku celcelinta nidaamkan dhowr jeer waa mid waxtar leh waxaanan ku celinaa toddobaadkii hal mar. Waqtiga naga dambeeya waxaan arki doonaa inaan soo bandhigi karno ku celcelin fara badan oo aan ku soconno xawaare aad u sarreeya markasta oo aan u baahanahay waqti soo kabasho oo yar. Jidhkeenu marba marka ka dambeysa wuxuu noqdaa mid waxtar badan oo awood u leh inuu saxo oo magdhabo isku dheelitir la'aanta muruqyada ee soo muuqan kara. Intaa waxaa sii dheer, waxay awood u leedahay inay ilaaliso isbarbar dhiga iyo kordhinta shaqada aerobic-ka waxaan ogaaneynaa intaa iyo in kabadan
Waxaan sidoo kale ku horumarin karnaa awoodeena jimicsiga iyadoo taxane ah oo daqiiqad iyo badh ah oo qabanaya burpe iyo daqiiqad iyo badh sambabada. Tan waxaa loo tixgeliyaa sida jimicsi xoog badan oo waliba u adeegta hagaajinta adkeysiga aerobic.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan awoodda aerobic.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Awoodda Anaerobic